हङकङमा आज ६२११ जनामा संक्रमण ९३६९ जना प्रारम्भिक केश र २४ घण्टामा ३२ जनाको मृत्यु - Gulmeli Online TV
हङकङमा आज ६२११ जनामा संक्रमण ९३६९ जना प्रारम्भिक केश र २४ घण्टामा ३२ जनाको मृत्यु
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १४:५४
नारायण भण्डारी हङकङ २२ फेब्रुअरी २०२२
हङकङ स्वास्थ्य विभागको सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) का डा चुआङ सुक-क्वानले आज ४.३० बजेको दैनिक कोरोना अपडेटको पत्रकार सम्मेलनमा ६,२११ नयाँ कोभिड-१९ पुष्टि भएको बताएका छन। तीमध्ये ३ केस आयातित र ६ हजार २०८ स्थानीय केश रहेका छन। आज रिपोर्ट गरिएका ३१ केसहरूमा डेल्टा भेरियन्ट र ३२६१ केसहरू ओमिक्रोन भेरियन्टमा समावेश थिए। अहिले पनि २१३ जनाको परीक्षण भइरहेको छ भने भाइरल लोड कम भएकाले ७६ जनाको नतिजा आउन सकेको छैन ।
डा. चुआङका अनुसार पाँचौं लहर सुरु भएयता जम्मा केस ६४ गुणा बढेको छ। केही दिनयता परीक्षण क्षमतामा सुधार भएकाले प्रारम्भिक केसको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको उनले बताइन् । तसर्थ, पुष्टि भएका केसहरूको कुल संख्याले महामारीको वास्तविक अवस्थालाई अझ सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। तैपनि, उनले आज बिहान १२ बजेसम्म ९ हजार ३६९ प्रारम्भिक कोभिड–१९ मा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको बताइन।
यसैबीच, तीन हजार ९७७ बिरामी अझै पनी अस्पतालमा भर्ना छन। पेनी बेमा रहेको क्वारेन्टाईनमा करिब १,९०० बिरामीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। डोर्सेट चुन वानमा थप २५० बिरामीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । १९ बिरामीहरू (१६ पुरुष र ३ महिला) अझै गम्भीर अवस्थामा छन् भने ४१-१०३ वर्ष उमेर समूहका ३० बिरामीहरू (१५ पुरुष र १५ महिला) गम्भीर अवस्थामा छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा कुल ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । उनीहरुमा ४५ देखि १०३ वर्ष उमेर समूहका १७ पुरुष र १५ महिला रहेका छन् । मृत्यु हुनेमा अधिकांश वृद्धवृद्धा थिए र उनीहरुलाई खोप लगाइएको थिएन । ४५ वर्षीय मृतक पुरुष बिरामीलाई पनि दीर्घकालीन रोग थियो ।
फेब्रुअरी २० मा ६६ देखि ९३ वर्ष उमेर समूहका ७ जना (५ पुरुष र २ महिला) बिरामीको मृत्यु भएको पनि खुलासा भएको छ । पाँचौं लहरको सुरुवातदेखि हालसम्म ३ बालबालिकासहित १४५ बिरामीको मृत्यु भएको छ । महामारी सुरु भएदेखि कूल ३५० बिरामीहरू बितिसकेका छन। भर्ना स्क्रीनिंगको क्रममा लगभग ५० बिरामीहरूले प्रारम्भिक रूपमा कोरोना पोजेटिभ परीक्षण देखिएको छ र ३० जना अन्यलाई उनिहरुको नजिकको सम्पर्कमा रहेको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। अस्पताल प्राधिकरणका ८ सय ७३ कर्मचारीको प्रारम्भिक परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ । अहिले अस्पतालका ९२ प्रतिशत शैया पूर्ण रूपमा प्रयोग भइसकेका छन।
निकै होसियार बनै अहिले निरन्तर रुपमा परिरहेको पानी र घटदो तापक्रमले पनी हङकङमा मानिसहरुलाई बिरामी पार्नमा सहयोग पुर्याई रहेको छ जसको कारणले मानिसहरुलाई रुघा खोकु लाग्ने ज्वरो आउने जस्ता सामान्य बिरामी बढिरहेका छन जसमध्ये अधिकांस बिरामीले घरमै घरेलु प्रविधि मार्फत उपचार गरिरहेका छन!
हङकङ युनिभर्सिटिको टोलिले मार्च महिनाको सुरुमा संक्रमणको दर १८३००० पुग्नेअनुमान
हङकङका अर्थ सचिव पल च्यानले आज गरे सबै हङकङबासी लाई १०,०००$ भौचरको घोषणा